Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Drone Vaovao afaka mampiakatra 200 kg ary manidina 40 km
Manana antsipiriany bebe kokoa ve ianao hanampiana an'ity fampahalalam-baovao ity?
Manana fampahalalana fanampiny, sary, horonan-tsary na rohy mahasoa ve ianao?
Tsindrio eto raha hampiasa an'ity fanambarana an-gazety ity ary mahazo fahitana bebe kokoa ihany koa.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba fandefasana famoahana amin'ny ho avy miaraka aminay, mankanesa any www.travelnewsgroup.com/visibility
Drone avo-mavesatra elektrika VoloDrone dia nanao sidina ampahibemaso voalohany androany tao amin'ny ITS World Congress 2021. Niaraka tamin'ny mpitarika lozisialy iraisam-pirenena DB Schenker, Volocopter, mpisava lalana ny fivezivezena an-tanàn-dehibe (UAM), dia nampiseho ny fampidirana VoloDrone tsy misy fangarony ao anaty rojom-pivarotana lozisialy miaraka amina entana enta-mavesatra. fihetsiketsehana fitaterana. Ireo mpiara-miombon'antoka dia nampiseho ny fandrosoany manan-danja nanomboka ny DB Schenker lasa mpamatsy vola stratejika ny Volocopter tamin'ny fiandohan'ny taona 2020.
Ny VoloDrones dia fitaovana hitondra enta-mavesatra hatramin'ny 200 kg. Izany no mahatonga azy ireo ho mety amin'ny asa maro be ary asa marim-pototra ihany koa.
lavitra dia lavitra
Ny VoloDrones dia mandeha lavitra. Miaraka amin'ny halavirana hatramin'ny 40 kilometatra dia afaka miasa ao anatin'ny tariby lehibe manomboka amin'ny toerana fiaingany izy ireo. Miaraka amin'ny karama goavambe dia manokatra fahafaha-manao zavatra lehibe izany.
Tahaka ny fiaramanidina fiaramanidina VoloCity antsika, ny VoloDrone dia miasa amin'ny herinaratra 100% ary manidina tsy andoavam-bola. Madio sy mangina - io no fomba fitaterana tonga lafatra.
Mandrehitra ny tsena maneran-tany ny zavakanto aziatika
Vaksiny COVID-19 vaovao taranaka manaraka
Fizahantany bibidia: Mila tantara maro loko
Beyond Zoom: IMEX America dia nanao fivoriana manokana ...